Faah faahin:- Qarax lagu weeraray xarunta degmada Wadajir ee Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax lagu weeraray xarunta degmada Wadajir ee Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax gaari loo adeegsaday oo duhurnimadii maanta ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qof naftii hallige ah oo watay gaari noociisu yahay Caasi ayaa la sheegayaa inuu gaariga ku dhuftay xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, halkaasi oo ay ku sugnaayeen mas’uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Illaa 10 qof ayaa la xaqiijyay inay qaraxaasi ku dhimatay, iyadoona dhaawaca uu intaasi ka badan yahay, waxaana dadka dhaawacmay ku jiray guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar C/laahi Xassan iyo qaar ka mid ah illaaladiisa, sida ay inoo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah.
Dadka dhaawacmay ayaa waxaa loola cararay Isbitaallada ku yaalla magaalada Muqdisho, wuxuuna qaraxaan sidoo kale burbur aad u xoogan u geystay goobihii ganacsi ee ku yaallay suuqa degmada Wadajir, halkaasi oo aad ugu dhaweyd xarunta la weeraray.
Dhinaca kale, Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi, waxayna sheegeen inay dileen saraakiil iyo askar badan oo ku sugneyd xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan ah mid degan, waxaana muuqaalo laga soo duubay qaraxa uu muujinayaa in burbur baahsan uu gaaray goobaha ganacsi ee ku yaalla suuqa Wadajir.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxaan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeysay ciidamada xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho ay howlgalo culus oo amni sugid ah ka wadeen degmooyinka gobolka Banaadir.